ဥပဒေစာအုပ်များ ၂၄ အုပ်စုစည်းခြင်း | ဓမ္မနှင့်စာပေနန်းတော်
ဓမ္မဗိမာန် တရားတော်များနှင့် သုတရသစာပေများစုစည်းရာသည်ဆိုဒ်လေးအား ရှာဖွေစုဆောင်းမိသမျှ တရားတော်များအား...စာပေ..စာအုပ်များအား စုစည်းတင်ပြခြင့်ဖြင့် ဒါနပြုလိုက်ရပါကြောင်း...မှီငြမ်းရှာဖွေရာ..Dhammadownload ဆိုဒ်နှင့် အခြားဘာသာရေးဆိုဒ်များမှ စုဆောင်းကာပြန်လည်မျှဝေပါသည်။ *** မူ၇င်းလိပ်စာများ ကျန်ခဲ့ပါက နားလည်စေလိုပါသည်.... ပြန်လည်မျှဝေခြင်း သက်သက်ဖြင့် ကူညီပါကြောင်း
» ဥပဒေစာအုပ်များ ၂၄ အုပ်စုစည်းခြင်း
ဥပဒေစာအုပ်များ ၂၄ အုပ်စုစည်းခြင်း
ဥပဒေစာအုပ်များ ၁။ မြန်မာနိုင်ငံ မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ - ဦးကျော်ဇေယျ http://www.mediafire.com/?q25b4o6ppu27xlw ၂။ ဥပဒေ(၁၀၀) ပုဒ်မ(၁၀၀၀) ရှောင်ဖို့သိဖို့ဆောင် - ဦးကျော်ဇေယျ http://www.mediafire.com/?dbvz5697brbh6xl ၃။အတိုင်ပင်ခံရှေ့နေ ၂ - ဦးကျော်ဇေယျ http://www.mediafire.com/?ymcs9ybw20byro2 ၄။ အစုစပ်လုပ်ငန်းအက်ဥပဒေ - ဦးကျော်ဇေယျ http://www.mediafire.com/?01n1jpk0c827sk2 ၅။ဥပဒေရေးရာဝေါဟာရ အဘိဓာန် - ဦးကျော်ဇေယျ http://www.mediafire.com/?undefined ၆။ အမှုသည်များလက်စွဲ - ဦးကျော်ဇေယျ http://www.mediafire.com/?od44aywyo46o3xx ၇။ဥပဒေသမား လက်စွဲစကား - ဦးကျော်ဇေယျ http://www.mediafire.com/?6a5dlwnkun1z1j7 ၈။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်မှု သိကောင်းစရာများ http://www.mediafire.com/?libt5geiqcnxqgq ၉။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) http://www.mediafire.com/?w3l5gnn532pjol9 ၁၀။မကြားရာသည် ရှေ့နေရှေ့ရပ် - ဦးကျော်ဇေယျ http://www.mediafire.com/?1qt6yfggtppx3c0 ၁၁။မြန်မာနိုင်ငံ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ( ရာဇသတ်ကြီး) http://www.mediafire.com/?e2ezve438axo62n ၁၂။ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ http://www.mediafire.com/?ib813298a36fkf0 ၁၃။ ရဲလက်စွဲ (ပထမတွဲ) - ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် http://www.mediafire.com/?7bzcnbs5bocglw0 ၁၄။ ရဲလက်စွဲ (ဒုတွဲ) ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် http://www.mediafire.com/?pjgd1py6adb90nh ၁၅။ သက်သေခံဥပဒေ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုချက် - ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်(၁၉၈၉) http://www.mediafire.com/?d3823dpdrm05kp3 ၁၆။ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ http://www.mediafire.com/?tuyz948akxk5a9d ၁၇။ ဗဟိုဘဏ် ဥပဒေ (1990 ဇူလိုင်2) http://www.mediafire.com/?4gwpw37jbcw0uwc ၁၈။ ရပ်ကွက်(သို့)ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၂ မတ် ၂၈) http://www.mediafire.com/?4jl6mrkc5k4i7k5 ၁၉။ ရပ်ကွက်(သို့) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ (၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄) http://www.mediafire.com/?4g7x3b20kcz74d5 ၂၀။ လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေ (၂၀၁၂ သြဂုတ်လ ၃၁) http://www.mediafire.com/?8l289ialb9bhhn7 ၂၁။ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ဥပဒေ (၂၀၁၂ မတ် ၂၈) http://www.mediafire.com/?bsg138nchgfghuy ၂၂။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ (၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂) http://www.mediafire.com/?q74q3sb03xba2ka ၂၃။ ပို့ကုန် သွင်းကုန်ဥပဒေ (၂၀၁၂ ၊ စက်တင်ဘာ ၇) http://www.mediafire.com/?f3dsgepsh3179vx ၂၄။မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ - ဦးကျော်ဇေယျ http://www.mediafire.com/?a8hkr986qndwjvh ဓမ္မနှင့်စာပေနန်းတော်သို့လာရောက်သူအပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာလို့ ချမ်းသာကြပါစေ..
ရှာဖွေစုဆောင်းထားသမျှတရားတော်များအားအားလုံးနာကြားပူဇော်နိုင်ရန်အလို့ငှါ ပြန်လည် စုစည်းတင်ပြထားပါသည်...ဗုဒ္ဓတရားတော်များနဲ့တစ်ကွ စာရေးဆရာများ၏ ရသ
စာပေများကိုလည်း ဖတ်ရှု ခံစားနိုင်ပါတယ်နော်... ဖတ်လိုသောစာပေများအား C-Box တွင်ရေးသားတောင်းဆိုခဲ့နိုင်ပါတယ်.....
%%% www.ninilayy.com %%%
Achoke Lay25 December 2013 at 23:01ကျေးဇူးပါဗျာReplyDeleteAdd commentLoad more...
<center><a href="http://ninilayy.blogspot.com/" style="background-color: white;" target="_blank"><img style="width: 259px; height: 165px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-A0goUvbPWJA/UcsBt1-xGrI/AAAAAAAAIa0/nwNu8EJUxuU/s1600/virus.png" /></a></center>
Blogs ပညာများ ( ၁ )
ဘလော့ Labels တွေ scorrl bar ထားနည်း
ဘလော့ရဲ့အရေးပါသော back up လုပ်ယူထားနည်းနိုငံတကာ နာရီ ကုဒ်ယူရန်မိမိဘလော့အတွက် APK လုပ်ယူနည်းဘလော့တက်ပလက်စိတ်ကြိုက်ပြင်နည်းမိမိဘလော့မှာ စာမျက်နှာလှလှလေးထည့်နည်းနိုင်ဆိုဒ်နဲ့တူသော ချက်ဘောက် လုပ်နည်းဘလော့ HTML ၀င်နည်းဘလော့ဆိုဒ်ဘား Java Script မှာကုဒ်ထည့်နည်းဘလော့မှာ Author-Admin ဖိတ်ခေါ်နည်းolderpost- never- post- home ကိုပုံနဲ့အစားထိုးမယ်ဘလော့တက်ပလက်ချိန်းနည်းဘလော့ဆိုဒ်ဘား ဘောင်ခတ်နည်းမိတ်ဆွေဘလော့တွေကို scorll bar နဲ့ထားနည်းနောက်ဆုံးတင်သမျှ Slider နဲ့အလှဆင်နည်း
Blogs ပညာများ ( ၂ )ဘလော့ကိုအလွယ်ဆုံးပြုပြင်နည်းBlog လုပ်နည်း အပြည့်အစုံMobile တွင် Post တစ်ခုတင်နည်းAndroid Phone & Teblet မှာ Blog Post တွေကိုလွယ်ကူစွာရေးနိုင်ဖို့cloud menu လှလှလေးလုပ်မယ်Facebook Fan Page ထည့်မယ်တင်သမျှ fb ပေါ်အော်တိုရောက်နည်းတက်ပလက်ချိန်းနည်းတက်ပလက် ဒေါင်းယူနည်းYou Might Also Like ပုံလေးတွေထည့်နည်းAuto Read More လေးထည့်နည်းဘလော့မှာ Favaicon အလွယ်ထည့်နည်းဘလော့လိပ်စာအမည်လေးပြေးနေခြင်လားဘလော့ခေါင်းစဉ်ရှေ့က ပုံလေးနဲ့အလှဆင်နည်းဘလော့ ခေါင်းစဉ် ထည့်နည်း နှင့် လင့်ချိတ်နည်းအပြည့်စုံ
Blogs ပညာများ ( ၃ )သက်တန့်ရောင်လင့်များဖန်တီးခြင်းဘလော့ဧည့်ကောင်တာလုပ်နည်း (၁)ဘလော့ဧည့်ကောင်တာလုပ်နည်း (၂)မိမိရဲ့ဘလော့ မြန်မြန်လေးပွင့်သွားအောင်လုပ်ချင်ရင်C-Box ဖရီးလုပ်နိုင်သော ဆိုဒ် (၁၀) ခုPost Title အောက်က Author,label.time ဆိုတာလေးထည့်နည်းဘလော့မှ ၀င်ဝင်တာနဲ့ ကြိုဆိုတဲ့ဘောက်လေးထည့်မယ်ဘလော့အတွက် နောက်ခံ ကာလာ/ ပုံ တွေထည့်နည်းRecent Comments ပုံစံလေးတမျိုးနဲ့လှနေခြင်ရင်ပို့စ်တင်နည်း (ဘလော့ကာအသစ်များအတွက်-သီးသန့်)ဘလော့ Read More လုပ်နည်း ပုံဖြင့်အစားထိုးနည်းဘလော့ search box လှလှလေးထည့်ဖို့ဘလော့မှာPopularPostsကိုSlideပုံစံပြောင်းနည်း Menu တွေ လင့်တွေကလစ်တာနဲ့ new lab နဲ့ထပေါ်အောင်လုပ်မယ်Popular Posts ကို slider လေးနဲ့ ဘလော့ထိပ်ကနေအလှဆင်မယ်ဘလော့အဟက်မခံရအောင် ကြိုတင်ကာကွယ် ပြင်ဆင်နည်းဘလော့ထဲမှာYoutube သီချင်းတွေကိုလွယ်ကူစွာထည့်နည်းမိမိဘလော့ပို့စ်မှာ ဓါတ်ပုံ မူဗီများးတင်နည်း
Blogs ပညာများ ( ၄ )
Blog ကို Back up လုပ်ပြီး xml ဖိုင်လေးကို သိမ်းထား.
ဘလော့အဟက်မခံရအောင် ကြိုတင်ကာကွယ် ပြင်ဆင်နည်း
Domain name ဆိုတာ
သင့်၏ Blogger site တွင် Malware ရှိ/မရှိစစ်ဆေးနည်း.
Reported Attack Page အဖြစ် မိမိဆိုဒ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရလျှင်
ဘလော့တွေ..ဆိုဒ်တွေ ရဲ့မှားယွင်းမှုကို ရှာဖွေပေးတဲ့နေရာလေး
Free Domain လေးတွေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်
Blogs ပညာများ ( Read More )
ဘလော့မှာ Readmore ကို ပုံလှလှလေးတွေသုံးခြင်
ပို့စ် အလွယ်ခေါက်သောနည်း( ရှယ်တယ်နော် )
Read More အလွယ်ကူဆုံးလုပ်ကြမယ်
Read More လုပ်နည်း ( လန်းတယ်နော် သူကတမျိုးလေး)
Auto Read More လေးထည့်နည်း
ပို့စ်ခေါက်နည်း အလွယ်ကူဆုံးလေးပါ (၂)
Blogs ပညာများ ( Social Widget )
ဘလော့မှာ Feedburner တွေကို Social Site တွေတဲ့အတူ ထားနည်း
အသဲပုံစံ နှင့် အသဲပုံစံ social widgets လေးပါ
ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Sharing Blogger Widget
ဘလော့ကာအတွက် Popup Subscribe Box လေးတွေ
မိတ်ဆွေဘလော့ကာများ-၁ဆော့ဝဲလ်မြို့တော်ညီနေမင်းမိုးညိုသား(နည်းပညာ)၀င်းကမ္ဘာကျော်မောင်ပေါက်(နည်းပညာ)YGN BloggerKP3 Familyအိုင်တီခေတ်(ကိုလတ်)စိုင်းသူ(နည်းပညာ)aaaaအောင်လေး(နည်းပညာ-သတင်း)လွမ်းဦးမောင်ခေတ်သစ်မောင်မောင် (စွယ်စုံကျမ်း)အမျိုးကောင်းသားအိုင်တီမုဆိုးလွင်မင်းဗိုလ်IT Sharing Networkမောင်လေ့လာအိုင်တီသားလေးမောင်ဝါသနာမောင်ဝေ( Free Movies Download)
မိတ်ဆွေဘလော့ကာများ-၂ဒီမိုးသား(သတင်း-နည်းပညာ)ထက်နေခအကြင်နာနန်းmrthangming(နည်းပညာ)Win Htut Tinလင်းကမ္ဘာဆေးရိုးသည်တန့်ဆည်သားလေးဗိုလ်လှိုင်း(ဆိတ်ဖြူသားလေး)အိုင်တီမီးသီးMDY Mobile Helperလမ်းပြကြယ်ပရဟိတအဖွဲ့သီဟဇော်(နည်းပညာ-သတင်း)ရွှေမန်းသားအာရှသားရဲ့နည်းပညာတော်ဝင်မင်းသားလေးနည်းပညာနှင့်ဘာသာရေးမျိုးချစ်မြန်မာလူငယ်ဇေယျာ(နည်းပညာ)ဖြိုးလင်းခသန်းထိုက်ဇော်(နည်းပညာ)မြန်အောင်သားဟက်ကာလေးChin Mobil Groupငြိမ်းချမ်း(နည်းပညာ)မရှိသေးပါမရှိသေးပါမရှိသေးပါမရှိသေးပါမရှိသေးပါ
စာအုပ်စာပေဆိုဒ်များသို့ဓမ္မနှင့်စာပေနန်းတော်မိုးညိုသား(စာအုပ်စဉ်)Myanmar IT Ebooksမောင်ထင်စာကြည့်တိုက်ဝိညဉ်သစ်စာကြည့်တိုက်ကျော်ကျော်ဦးစာပေKee Kee စာအုပ်ဆိုဒ်onlinepyadaikမမြန်မာစာအုပ်များစုစည်းမှုMyanmar Ebooksရွှေစကားစာပေလောက-၅မြန်မာစာအုပ်စဉ်မြန်မာစာအုပ်များ Onairmm စာအုပ်စင်မရှိသေးပါမရှိသေးပါမရှိသေးပါမရှိသေးပါ
မြန်မာ ebooks များ(စာအုပ် 400ခန့်) မြန်မာပြည်က စာရေးစရာတွေရဲ့ မြန်မာ e-Books တွေပါ။ ကျွန်တော် တင်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စုဆောင်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ မူပိုင်ခွင့်ကိုနားလည်ပါတယ်...
အကြည်တော်ရဲ့ စာအုပ်တွေပါ... download မလုပ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အွန်လိုင်းမှာ ဖက်လို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်တာပါ... ခင...
တာရာမင်းဝေ စာအုပ်များ ( ၄၈ ) အုပ်
တာရာမင်းဝေစာအုပ်များ (၄၈ အုပ်) ၀၁။ တာရာမင်းဝေ - စုန်းကိုက်ခံရတဲ့သစ်သီး http://www.mediafire.com/ ?rn75werh7lffx5r ၀၂။ တာရာမင်...
ဓမ္မဓူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ တရားတော်များ
ဓမ္မဓူတ အရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ တရားတော်တွေ စုစည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နာယူလိုယူများ download ရယူပါခင်ဗျား.. AshinChekaida-PahtanaMeaning-Pa...
ဥပဒေစာအုပ်များ ၁။ မြန်မာနိုင်ငံ မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ - ဦးကျော်ဇေယျ http://www.mediafire.com/ ?q25b4o6ppu27xlw ၂။ ဥပဒေ(၁၀၀) ပုဒ်...
Weekly My Post
<!-hazy life-mouse poiter-->
ဘလော့ခရီးသည် | လယ်တီမြေသား | ရုပ်ရှင်မြို့တော်
Copyright © 2013. ဓမ္မနှင့်စာပေနန်းတော် - မှ....ကြိုဆိုပါ၏
Template Created by ဘလော့ခရီးသည် Edited by အောင်အောင်(မကစ)
မှ.. စာအုပ်စာပေများအားပညာဒါန အနေဖြင့်.. ပြန်လည်ကာ မျှဝေခဲ့ပါသည် ။